Anigu waxaan ahay qof balwad leh, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Aad bay iigu adag tahay inaan qirto in lay qabatimay. Been baan u sheegay been ah naftayda iyo hareerahayda inta noloshayda oo dhan. Sidan, waxaan la kulmay dad badan oo qabatimay kuwaas oo ku tiirsan waxyaabo kaladuwan sida khamriga, kookaha, heroin, marijuana, tobaakada, Facebook iyo daroogooyin kale oo fara badan. Nasiib wanaagse, maalin maalmaha ka mid ayaan wajihi karay runta. Waan qabatimay Waxaan u baahanahay caawimaad!
Natiijooyinka qabatinka balwadu markasta waa isku mid qofkasta oo aan arkay. Jidhkaaga iyo xaalada noloshaadu waxay bilaabmayaan inay sii xumaadaan. Xiriirradii qabatimay muqaadaraadka ayaa gabi ahaanba burburay. Asxaabta kaliya ayaa uga hartay balwadaha, haddii aad ugu yeeri karto taas, waa kuwa ka ganacsada daroogada ama kuwa khamriga keena. Qaar ka mid ah dadka balwada leh waxaa si buuxda adoonsiga uga ganacsada dadka ka ganacsada maandooriyaha, dambiyada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah. Tusaale ahaan, Thandeka way sujuudday (Magac ayaa la beddelay) oo loogu talagalay cuntada iyo dawooyinka malaxkeeda illaa qof ka badbaadiyey noloshan xun. Fekerka balwadda ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay. Qaarkood waxay bilaabaan inay wax yareeyaan, arkaan oo maqlaan waxyaabo aan jirin. Nolosha daroogada ayaa ah waxa kaliya ee iyaga khuseeya. Waxay runtii bilaabaan inay rumeystaan ​​rajo la'aantooda oo ay la hadlaan naftooda, daroogooyinka waa wanaagsan yihiin waana in la sharciyeeyaa si qof walbaa ugu raaxeysto.
Dagaal maalin walba dhaca
Dhamaan dadka aan aqaan ee ka sameeyay qabatinka balwadda waxay aqoonsadaan halista ay ku sugan yihiin iyo ku tiirsanaanta waxayna raadiyaan qof ka xumaada iyaga oo si toos ah uga kaxeeya godka daroogada ilaa xarunta baxnaaninta. Waxaan la kulmay dad iyagu maamula xarun caafimaad oo dadka balwada leh. Kuwo badan oo ka mid ah waa rag maandooriyeyaal ah. Waxay yihiin kuwa ugu horreeya ee qirta in xitaa ka dib 10 sano oo aan daroogo lahayn, maalin kasta ay weli halgan ugu jirto sidii ay nadaafadda u ahaan lahaayeen.
Qabatinkeygu wuxuu ku bilaabay awoowayaasheen. Qof ayaa u sheegay inay wax ka cunaan dhir gaar ah maxaa yeelay waxay ka dhigeysaa inay caqli leeyihiin. Maya, warshadda ma aysan aheyn xashiishad, mana ahayn warshada loo yaqaan 'cocaine' ee laga sameeyo. Laakiin iyadu waxay lahayd halqabsiyo la mid ah iyada. Waxay ka dhacday xidhiidhkoodii aabahood waxayna rumaysteen beenta. Kadib markay cuneen geedkaan, jirkooda wuxuu noqday mid balwad leh. Waxaan ka dhaxlay qabatinka iyaga.
Aan kuu sheego sida aan ku ogaadey balwadayda. Markay ogaadeen inuu yahay balwadle, walaalkay, rasuul Bawlos, wuxuu bilaabay inuu waraaq u qoro walaalihiis iyo walaalihiis si uu uga digo qabatinka qabatinka. Maandooriyaha aalkolada waxaa loogu yeeraa khamri-cabeyaal, kuwa kalena waa tuugsi, qoob-ka-jeexyo ama kuwa doode. Kuwa nooca aan qabatimay qabatimay waxaa lagu magacaabaa dembilayaal.
Mid ka mid ah waraaqihiisa Bawlos wuxuu ku yidhi: "Sidaa darteed, sida dembigu dunida u soo galay nin iyo dhimasho xagga dembiga, dhimashadu waxay gaadhay dadka oo dhan maxaa yeelay kulligood way wada dembaabeen» (Rooma 5,12). Bawlos wuxuu gartay inuu yahay dambiile. Qabatinkiisa awgeed, dembigiisa awgiis, wuxuu ku mashquulsanaa dilidda walaalihiis oo dadka kale geliyay xabsi. Isaga oo dulman, qabatimay (Dembi) dhaqankiisii ​​wuxuu mooday inuu wax wanaagsan sameynayo. Sida dhammaan dadka balwada leh, Bawlos wuxuu u baahday qof ku tusiya inuu u baahan yahay caawimaad. Maalin maalmaha ka mid ah markuu ku socday safar dil ah oo uu ku tegey Dimishaq, Bawlos wuxuu la kulmay ninkii Ciise (Falimaha Rasuullada 9,1: 5). Shaqadiisa noloshiisa oo dhan waxay ahayd inuu ka xoroobo qabatimayaasha aniga oo kale ah waxaanan kahelay qabatinkeena dambiga. Wuxuu u yimid guriga dembiga inuu na soo qaado. Sidii ninkii u tegay meesha tuullada si looga saaro dhillada Thandeka, wuxuu u yimid oo na dhex degay dembiilayaal si uu noo caawiyo.
Aqbal caawimada Ciise
Nasiib darrose, xilligii Ciise ku noolaa guriga dembiga, qaar baa mooday inaysan u baahnayn caawimaadiisa. Ciise wuxuu yiri: "uma aan imid inaan u yeedho kuwa xaqa ah; waxaan u imid inaan u yeedho dembilayaasha inay toobad keenaan" (Luukos 5,32 Tarjubaadda New Geneva). Bawlos ayaa u yimid maskaxdiisa. Wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay caawimaad. Qabatinkiisu aad ayuu u xoog badnaa inkasta oo uu doonayo inuu joojiyo, wuxuu samaynayay wixii uu necbahay. Mid ka mid ah waraaqadiisa ayuu ka cawday xaaladdiisa: "Ma garanaayo waxaan sameeyo. Sababta oo ah ma sameeyo waxa aan doonayo; waxaan sameeyaa waxa aan necbahay" (Rooma 7,15). Sida dadka balwada leh, Bawlos wuxuu gartay inuusan caawin karin. Xitaa markii uu rehab ku jiray (Dembiilayaasha qaar waxay ugu yeeraan kaniisadda), qabatimadu way sii xoog badneyd oo wuu iska deyn lahaa. Waxa uu gartay in Ciise uu dhab ka ahaa ka caawinta isaga in la joojiyo noloshan dembiga ah.
"Laakiin waxaan ku arkaa sharci kale oo ka mid ah addimmadayda kaasoo ka soo horjeedda sharciga maankayga ku haysa wuxuuna igu hayaa sharciga dembiga ee ku jira addimmadayda. Waxaan ahay qof xanuun badan! Yaa iga badbaadi doona jidhkan dhimashada leh? Ilaah baa mahad leh xagga Ciise Masiix. Sidaas daraaddeed waxaan haatan ugu adeegaa sharciga Ilaah; laakiinse waxaan jidhka ugu adeegaa sharciga dembiga » (Rooma 7,23-25).
Sida marijuana, cocaine, ama heroin, daroogadaan dembi leh waa qabatin. Haddii aad aragtay khamri ama maandooriye, waxaad garan doontaa inay gabi ahaanba qabatimay addoonsiga iyo addoonsiga. Waxaad lumisay xakamaynta naftaada. Haddii qofna uusan iyaga siinin caawimaad oo aysan u arkin inay u baahan yihiin caawimaad, maandooriyayaashu way burburin doonaan. Markuu Ciise caawimaad siiyay qaar ka mid ah balwadaha danbiga sida aniga oo kale, qaar baa mooday inaysan addoomo u ahayn wax ama qof.
Ciise wuxuu ku yidhi Yuhuuddii isaga rumaysay: «Haddaad ereygayga sii xajisaan, runtii waxaad noqon doontaan xertayda, waadna ogaan doontaan runta, runtuna way idin xorayn doontaa. Markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, Annagu farcankii Ibraahim baannu nahay, oo weligayo addoommo ninna uma ahayn. Sidee u dhahdaa: Waa inaad xor noqotaa? » (Yooxanaa 8,31: 33)
Qabatinka maandooriyaha waa addoonsiga daroogada. Xil dambe ma haysto xorriyadda uu ku go'aaminayo bal inuu qaato daroogada iyo in kale. Isla sidaas oo kale ayay u khusaysaa dembiilayaasha. Bawlos wuxuu ka cabanaayay inuu ogaa inuusan dembaabin, laakiin wuxuu sameeyay wixii uusan dooneyn inuu sameeyo. Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Ku alla kii dembaabaa waa addoonsiga dembiga. (Yooxanaa 8,34).
Ciise wuxuu noqday aadanaha inuu dadka ka xoreeyo addoonsiga dembiga. "Masiixu xor buu inaga dhigay xorriyadda! Sidaa darteed adkeyso oo ha u oggolaan naftaada in lagu qasbay mar kale harqoodka addoonsiga!" (Galatiya 5,1 New Geneva Translation) Waad aragtaa, markii Ciise ku dhashay bini aadamka, wuxuu u yimid inuu badelo bini-aadamkeenna si aynaan mar dambe dembi ugu noqon. Wuxuu ku noolaa dembi la'aan oo waligiis addoon buu noqday. Wuxuu hadda siiyaa "bini'aadanka dembi la'aan" dhammaan dadka oo bilaash ah. Taasi waa warka wanaagsan.
Qiyaastii 25 sano ka hor waxaan ogaaday inaan qabay dambiga. Waxaan ogaaday inaan ahay dambiile. Sida Paul oo kale, waxaan ogaadey inaan u baahnaa caawinaad. Qaar ka mid ah kuwa ka soo kabsaday balwada ayaa ii sheegay in halkaas ay ku taal xarun lagu dhaqan celiyo. Waxay ii sheegeen in haddii aan imaado ay dhiirigelin karaan kuwa iyagu isku dayay inay nolosha dembiga ka tagaan. Waxaan bilaabay inaan xaadiro kulamadooda Axadaha. Ma fududaan. Anigu weli waan dembaabaa waqti ka waqti, laakiin Ciise wuxuu ii sheegay inaan diirada saaro noloshiisa. Wuxuu qaatay noloshayda dembiga ah oo wuxuu ka dhigay naftiisa oo wuxuu i siiyey noloshiisa aan dembi lahayn.
Waxaan ku noolahay nolosha aan hadda ku noolaado anigoo ku aaminay Ciise. Tani waa qarsoodigii Bawlos. Wuxuu qoray: "Waxaa iskutallaabta laygula qodbay Masiixa, waan noolahay, laakiin ma ihi, laakiin Masiixu aniga ayaa igu dhex nool. ii soo dhiibay " (Galatiya 2,20).
Waxaan garwaaqsaday inaanan rajo ku lahayn jidhkan balwad leh. Waxaan ubaahanahay nolol cusub. Waxaan iskutallaabta kula dhintay Ciise Masiix iyo sarakicidda kuwii dhintay waxaan u kacay nolol cusub Ruuxa Quduuska ah oo waxaan noqday abuur cusub. Ugu dambayntii, si kastaba ha noqotee, wuxuu i siin doonaa jidh cusub oo aan dembiga u sii ahaan doonin. Wuxuu ku noolaa noloshiisa oo dhan dembi la'aan.
Waxaad arkeysaa runta, Ciise ayaa mar hore idin xoreeyay. Aqoonta runta ayaa xorta. "Waad ogaan doontaa runta runtuna way idin xorayn doontaa" (Yooxanaa 8,32). Ciise waa runta iyo nolosha! Uma baahnid inaad wax sameyso si Ciise ku caawiyo. Xaqiiqdii, wuxuu ii dhintay aniga oo aan wali ahay dambiile. "Maxaa yeelay nimco laguugu badbaadiyey rumaysad, mana aha xagga idinka inaan ku socono dhexdeeda » (Efesos 2,8: 10).
Waan ogahay in dad badani ay quudhsadaan dadka balwada leh oo xitaa xukumaa. Ciise sidan uma sameeyo. Wuxuu sheegay inuu u yimid inuu badbaadiyo dambiilayaasha, oo uusan iyaga xukumin. "Maxaa yeelay Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u badbaadiyey adduunkoo dhan." (Yooxanaa 3,17).
Aqbal aqriska Kirismaska
Haddii ay ku saameysey balwadda, sida dambiga, waad ogaan kartaa oo aqoonsan kartaa in Ilaah uu si aad ah kuugu jecel yahay dhibaatooyinka dhibaatooyinka balwadda. Tallaabada ugu horreysa ee soo kabashada ayaa ah inaad iska dhaafto madax-bannaanida aad adigu dooratay ee Ilaah oo aad gebi ahaanba ku tiirsanaato Ciise Masiix. Ciise wuxuu buuxiyaa faaruqnimadaada iyo yaraantaada, oo aad ku buuxisay wax kale oo beddelaad ah. Isaga ayaa isaga ku buuxiya Ruuxa Quduuska ah. Ku tiirsanaanta guud ee Ciise ayaa ka dhigaysa inay ka madax bannaanaadaan wax kasta oo kale!
Malaa'igtii baa tidhi: "Maryan waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise, maxaa yeelay wuxuu dadkiisa ka badbaadin doonaa dembiyadooda" (Matayos 1,21). Masiixa oo keena badbaadada la raadin jiray qarniyo ayaa hadda halkan jooga. "Badbaadiyaha ayaa maanta kuugu dhashay, kan Masiix oo ah magaalada Daa'uud" (Luukos 2,11). Hadiyadda ugu weyn ee Eebbe adiga kuu gaar ah! Hambalyo hambalyo